काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रमा निर्वाचन तयारी पूरा, कहाँ कहाँ हुँदैछ मतगणना ? – Himalaya TV
Home » समाचार » काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रमा निर्वाचन तयारी पूरा, कहाँ कहाँ हुँदैछ मतगणना ?
काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रमा निर्वाचन तयारी पूरा, कहाँ कहाँ हुँदैछ मतगणना ?
२० मंसिर २०७४, बुधबार १०:३५
काठमाडौं, २० मंसिर । सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र र मतदाता भएको काठमाडौं जिल्लामा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ ।
काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं १ का मुख्य अधिृकत रमेशराज पोखरेलका अनुसार १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानका लागि तयारी पूरा भएको हो। केही प्राविधिक काम भने आजै बेलुकासम्म सकिने उनले बताए।
पोखरेलका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र पुर्‍याउने काम भइरहको छ । सुरक्षित रुपमा मतपत्र लान सक्नेलाई मंगलबारदेखि नै मतपत्र दिइएको छ भने सुरक्षित रुपमा लान नसक्ने स्थानमा आयोगले आजसम्म पुर्याउने तयारी छ ।
१० निर्वाचन क्षेत्रमा आयोगबाट दसै निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक निर्वाचन अधिकृतसहित ५ हजार ८४८ कर्मचारी खटिएका छन्। त्यसमा उपसचिव ३५५, शाखा अधिकृत ७३१ नायब सुब्बा ३७६ र २ हजार ९२४ सहायक कर्मचारी र एक हजार ४६२ कार्यालय सहायक कर्मचारी रहेका छन्।
काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ७ सय ३१ मतदान केन्द्र र ३ सय ९ मतदानस्थल छन् । काठमाडौंमा रहेको १० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार १ सय ७१, प्रदेश सभा (क) मा १ सय ७ र प्रदेशसभा (ख)मा १ सय १५ रहेका छन् । कूल मतदाता सङ्ख्या ६ लाख ३० हजार ४ सय ६० छ ।
आयोगले मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि मोबाइल टोलीसमेत तयार गरिसकेको छ । आयोगले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, विश्वासिलो तरिकाले गर्न चाहेको छ भने मत बदर हुन नदिनका लागि बझुर मात्र उपयुक्त स्थानमा मतदान गर्न आग्रह गरेको छ।
मतगणनास्थलमा सिसी टिभी र जाली
मतगणना स्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्वाचन आयोगले १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सिसी टिभी क्यामेरा र तारजाली राख्ने तयारी गरेको छ। ‘विगतमा भएको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित बनाउन सिसी टिभी क्यामेरा जडान र प्रतिनिधिले हर्ने मिल्ने गरी जाली राख्ने तयारी भएको छ,’ काठमाडौंका मुख्य निर्वाचन अधिकृत पोखरेलले भने।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिका चितवनमा देखिएको समस्या पुनः नदोहोरियोस् भनेर आयोगले मतगणनामा सिसी टिभी क्यामेरा र जालीको प्रयोग गर्न लागेको जनाएको छ ।
सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्रतिनिधि र मतगणनामा खटिएका कर्मचारी एकै ठाउँमा राख्न नहुने सुझाव आएपछि तार जालीको प्रयोग गर्ने तयारी भएको हो । आयोगले प्रतिनिधि र कर्मचारीसँगै नहुने गरी बीचमा राख्ने तर दुवैले राम्ररी देखिने गरी राख्ने तयारी गरेको छ।
काठमाडौंमा सबै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना एकै ठाउँमा गणना गर्दा ढिलाइ हुने भएकाले विभिन्न स्थानमा मतगणना हुने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ।
काठमाडौंका मुख्य निर्वाचन अधिकृत पोखरेलका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नं १, २, ३ र ४ राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना हुनेछ । त्यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र नं ५ र ७ को सहकारी विकास विभागको तालिम केन्द्र बानेश्वरमा मतगणना हुन्छ ।
क्षेत्र नं ९ र १० अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बानेश्वरमा मतगणना हुन्छ । क्षेत्र नं ८ को वन परिसर बबरहलमा र ६ नम्बरको जिल्ला समन्वय समिति बबरमहलमा मतगणना हुने तयारी भएको छ । रासस